Kurapa kwekuverenga Kunzwisisa muAphasia - Cognitive Kudzidziswa
Iwe uripano: musha » Articles » aphasia » Iko kurapwa kwekuverenga kunzwisisika muaphasia
L 'aphasia chinetso chemutauro chinozviratidza mukukanganisa kugadzirwa kana kunzwisisa kwemuromo kana mutauro wakanyorwa. Zvinoitika kunyanya mushure mekukuvara kwehuropi kana sitiroko uye zvinogona zvakare kutungamira mukuverenga kunzwisisika matambudziko. Nekuda kweizvozvo, vanhu vane aphasia vanowanzo kusangana hupenyu hwakadzikiswa.
Kuverenga kushomeka kunosiyana pakuratidzika kwavo uye shanduko yepasi. Zvinogona kuitika kana uchiverenga zvinonzwika kana kunzwisisa izvo zvinoverengwa, zvese zvichireva kune rimwe izwi uye zvinyorwa zvese. Uyezve, izvo zvikonzero zvinoita zvekuverenga kushomeka zvakasiyana: ivo vanogona kunetseka nezve phonological kana lexical maitiro, pamwe nekubatana nekuchinjika kwenzvimbo yekuziva.
Pakutanga, marapirwo akati wandei akagadziriswa kugadzirisa matambudziko ekuverenga. Iko kushandiswa kwemaitiro ekuziva ndiko kwaigamuchirwa zvakanyanya; izvi zvinobvumidza muverengi kugadzirisa kukanganisika kwekuverenga asi haana kuratidzwa kuti atsanangure maitiro ekuzvibata uye kunanga kurapa kwekunzwisisa kurapa padanho remavara kune vanhu vane aphasia.
Muna 2018 Purdy uye vanobatsirana vakaita ongororo yakarongeka yezvinyorwa zvine chekuita nekunzwisisa kwemavara matambudziko muapasia uye nemimwe mishonga yekurapa. Kunyanya, ina marudzi ekurapa akaonekwa:
Kurapa kwekuverenga zvinonzwika: yakavakirwa kunatsiridza nzwisiso nekutarisisa kuverenga zvinonzwika muvanhu vane aphasia zvine mwero-zvakanyanya
Strategic-based kurapwa: yakagadzirirwa kugadzirisa kunzwisiswa kwekuverenga; inosiyana maererano nehunhu uye kuumbwa ratings. Inoita sekurapa kwakanaka kune vanhu vane hunyoro aphasia kana kunetseka mukuverenga kunzwisisa.
Kuchenjera kurapwa: inotarisa pazvikonzero zvinokonzera, semuenzaniso matambudziko e Attenzione o kushanda ndangariro, avo vanoitirwa basa rekuverenga matambudziko ekunzwisisa. Inoratidza kuvandudzwa kwevanhu vane aphasia zvine mwero uye imwe nhanho yekusara kugona kuverenga iwo mavara.
Iwe unogona zvakare kufarira: Yekutarisira kusanzuka uye aphasia: hukama hupi?
Hierarchical kurapwa: kurapwa kwekuverenga kunoenderana nemakomputa ekurovedza zvinoenderana nezvakapihwa naKartz naWertz. Basa ravo raizoratidza kuti komputa-inoitwa yekurapa kuverenga inogona kuita kwete chete kuverenga, asiwo kune zvimwe zvisiri kuverenga mitauro zviitiko.
Mhedzisiro yekuongororwa kwehuwandu huwandu hwezvidzidzo zvakaongororwa hwakasiyana zvakanyanya. Nekudaro, vanyori veakarongeka ongororo vanozivisa kuti iyo kurapwa kwekuverenga zvinonzwika ingangove yakaoma kwazvo yenzira dziripo uye inozviratidza seinogona kugadzirisa kunzwisiswa kwekuverenga.
Ikoko kwaizove zvakare nehumbowo hwekushanda kweiyo makomputa ekuverenga ekurapa maitiro, asi mwero wekugona uye kugadzirisa pakati pemapoka unosiyana zvakanyanya pakati pezvidzidzo zvakasiyana zvakaitiswa nenzira iyi.
Purdy nevavanoshanda navo vanopedzisa kudaro kuverenga zvinonzwika kurapwa kwaizoita sekutungamira mukuvandudza kukuru kune vanhu vane aphasia zvakanyanya, nepo dzimwe nzira dzaizoratidza budiriro mune avo vanhu vane zvidzikiso zvishoma zvekuverenga. Mishonga yasara, i.e. iyo yakavakirwa pazano, kurapwa kwekuziva, uye kurapwa kwemashure, zvakave nekubudirira mukuvandudza kunzwisiswa kwekuverenga, asi mhedzisiro yacho haienderane. Zviripachena, mutsauko wakakura muvatori vechikamu, zvirevo zvekurapa, uye kuomarara kwekuyedza kunogona kudzivirira mhedziso kubva mukukwezvwa nezve kugona kweumwe kurapwa kune mumwe munhu ane aphasia.
Mune ramangwana, zvidzidzo zvinodzorwa zvekurapa zvakanangana nekushomeka kwekuverenga kwekunzwisisa zvinogona kubatsira kuvandudza kunzwisiswa kwevanhu aphasia. Kufunga nezve kusarudzwa kwevatori vechikamu, kusimba kwekurapwa, uye kusimba kwenzira kunogona zvakare kugadzirisa kunaka uye kugona kwekuverenga kunzwisisika muaphasia.
Iwe unogona zvakare kufarira: Kutyaira kugona mumhando nhatu dze dementia: mukana wekutarisa neuropsychological
Katz, RC, & Wertz, RT (1992). Makomputa emakomputa ekuverenga ekurapa mune aphasia. Aphasiology, 6(2), 165-177.
Purdy, M., Coppens, P., Madden, EB, Mozeiko, J., Patterson, J., Wallace, SE, & Vakasunungurwa, D. (2019). Kuverenga kunzwisiswa kurapwa mune aphasia: Kuongorora kwakarongeka. Aphasiology, 33(6), 629-651.
aphasia, aphasia uye kunzwisisa kwechinyorwa, aphasia kugadzirisa, chinyorwa kunzwisisa kunzwisisa
Iko kurapwa kwekuverenga kunzwisisika muaphasia2020-09-112020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/il-trattamento-della-comprensione-della-lettura-nellafasia.png200px200px
Kubudirira kwetekinoroji nyowani pakurapa kwepashure-sitiroko anomaliesAphasia, Kudzoreredza
Telerehabilitation yekutaura pathologies mune vakuruAphasia, Zvinyorwa